HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goun Grika Groenlandey Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nyungwe Nzema Népali Ossète Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Twi Télougou Urhobo Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Niezaka be aho mba hilaza ny marina foana, ka tonga dia hiaiky rehefa diso, ary ho vonona hizaka ny vokatry ny ataoko.”—Alexis.
“Ilana herim-po aloha ilay izy e, nefa lasa atokisan’ny olona ianao avy eo. Fantany mantsy fa tsy mandainga ianao. Na dia tsy nety aza ny nataonao, dia lasa misy vokany tsara ilay izy rehefa miaiky ianao fa diso.”—Richard.
“Nanao fahadisoana be aho indray mandeha. Tonga saina aho tamin’izay hoe tokony hitsotra ny marina aho fa tsy hanafina. Fantatro fa tsy hotahin’i Jehovah mihitsy aho raha tsy manao an’izay.”—Rachel.
“Tsara ny mieritreritra an’izay diso nataonao, dia mandray lesona amin’ilay izy, amin’izay ianao tsy mamerina intsony. Aza eritreretina be foana anefa ilay izy, sao ho kivy eo fotsiny ianao.”—Elliot.
“Rehefa diso aho, dia ataoko anatra ho amin’ny sisa ilay izy. Eritreretiko tsara fotsiny izay hatao amin’ny manaraka rehefa misy hoatran’iny indray. Sady ilaina koa izany raha te hihamatotra.”—Vera.
“Misy olona kivy be rehefa manao fahadisoana, fa misy indray tsy mivaky loha mihitsy. Samy tsy mety anefa ireo. Tsara kosa ny mandray lesona amin’ilay izy dia tsy mamerina intsony, nefa tsy hoe mifantoka be amin’iny foana.”—Connor.
“Raha mianjera izao ny mpihazakazaka, dia miezaka mitsangana haingana izy ary lasa indray, fa tsy hoe be hambom-po dia tsy manohy intsony. Izany koa no tokony hataonao rehefa diso ianao. Mandraisa lesona, miezaha mafy hanarina izay tsy mety, dia ho lasa olona tsara kokoa ianao.”—Dami.
“Aza atao mahakivy izay fahadisoana nataonao. Makà fotsiny fianarana amin’ilay izy amin’izay ianao tsy mamerina intsony, kanefa aza manamelo-tena be eo foana. Ekeo hoe efa vita iny, dia tohizo ny fiainanao.”—Zipporah.